आज क्रिसमस डे, थाहा पाउनुहाेस् तपाईँकाे राशिफल
कोरोना ओमिक्रोन एकीकृत समाजवादी राशिफल स्वास्थ्य खोप हरप्रहर टि.भी. आर्थिक
आजकाे राशिफल : कुम्भलाई उर्जा मिल्ने, चन्द्रमा कन्या राशिमा
मलेसिया तथा खाडी देशहरुमा भिजिट भिसामा जान रोक, यस्ता व्यक्ति मात्र जान पाउने
अधिकांश कर्मचारीलाई कोरोना भएपछि सोमबारबाट ललितपुर महानगरपालिका बन्द
वैशाखमा चुनाव नगर्ने गठबन्धनका नेताहरुको सहमति !
दोस्रो पटक पनि पर्यटनमन्त्री आलेले गरे कोरोनालाई पराजित
ज्यापु महागुथि नेपाः येँ महानगर समितिमा पंचनारायण महर्जनको नेतृत्व
‘खेती सुरु गर्दा बौलायो भने, अहिले आम्दानी देख्दा लोभिन्छन् ‘
बासना क्रियशनको प्रस्तुतिमा पोखरेली कलाकारहरुको ‘गुपचुप’ सुरु
उदाय् समाजको तेस्रो सामूहिक संघदान
प्रचण्डको प्रतिवेदनको कडा आलोचना : प्रतिनिधिले उठाए भारतदेखि एमसीसी, यौन, धनाड्य, परिवारसम्मको विषय
आज चन्द्रमा मकर राशिमा, थाहा पाउनुहाेस् तपाईंकाे राशिफल
त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने सबै आन्तरिक उडान रद्द, अन्तराष्ट्रियतर्फका उडान भने नियमित
आज रातभर पशुपतिनाथमा धनुर्मास पूजा गरिँदै
चर्चित र्‍यापर लाउरे ब्राउन सुगर कारोबारी
प्रकाशित मिति: २०७८ पौष १०, शनिबार (१ महिना अघि)
काठमाडाैं – १० पुस शनिबार । २५ डिसेम्बर । क्रिचियन धर्माबलम्बीको क्रिसमस डेका रुपमा आजको दिन मनाइन्छ । सरकारले आज बिदासमेत घोषणा गरेको छ । यद्यपि आज शनिबार नेपालमा साप्ताहिक बिदाको दिन हो ।
पौषकृष्णपक्ष षष्ठी तिथि, पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र, प्रीति योग, चन्द्रमा सिंह राशिमा छ । आज बिहान ९:३९ देखि १०:४७ सम्म राहुकाल रहेको छ । ११:४४ देखि १२:२५ सम्म अभिजित मुहूर्त रहेको छ । आजका देवता विष्णु र ग्रहदेव बुध रहेको छ । शनिबार शनिदेवको उपायका लागि उत्तम दिन हो । त्यसैले आफ्नो घर नजिकै रहेको पिपलको बृक्षमा जल अभिषेक गर्नु उत्तम हुनेछ ।
मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ) : व्यापारव्यवसायबाट लाभ हुनेछ । परिवार र सन्तानबाट साथ सहयोग पाउन सकिन्छ । तपाईँको योजना सफलताको लागि आफन्तजनको सहयोग आवश्यक हुनेछ । आजको यात्राबाट फाइदा हुनसक्छ । यात्रामा निस्कनु भन्दा पहिले कन्यालाई दक्षिण दिएर निस्कदा राम्रो हुनेछ ।
वृष (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो) : आजको दिन व्यापारमा सोचेअनुसार नहुनसक्छ । फाइदा नहुँदा निराश हुनु पर्नेछ । सकारात्मक भएर आफनो नियमित काममा लाग्नुहोला । आजको दिन आफूभन्दा ठूला व्यक्तिसँग भेटघाट गर्दा नयाँ कार्ययोजना तयार हुनसक्छ । आशीर्वादका लागि सम्मानित व्यक्तित्वसँग भेटवार्ता गर्नसक्नुहुनेछ ।
मिथुन (क.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह) : आजको दिन मनमा अनेक कुरा खेल्नेछ । परिवार र आफन्तजनले अनेक आरोप लगाउन सक्नेछन् । मनमा निराशा उत्पन्न हुनसक्छ । त्यसैले आजको दिन सकारात्मक सोच राखेर काम गर्नुभयो भने मात्र खुसी हुनसक्नु हुनेछ। आजको दिन मौन र अनावश्यक काममा घर बाहिर नजानु होला ।
कर्कट (हि.हू.हे.हो.डा.डि.डु.डे.डो) : पारिवारिक तनावका कारण केही समस्या आउनसक्छ । कसैसँग विवाद र झगडा नगर्नुहोला । आजको दिन कसैसँग विवाद भयो भने तपाई र तपाइँसग विवाद गर्ने दुवै व्यक्तिको हानी हुनसक्छ । यात्रा गर्नुभयो भने अनावश्यक खर्च हुनेछ । त्यसैले आजको शनिवार आफनो नियमित काममा ध्यान दिनु उत्तम हुनेछ ।
सिंह (मा.मि.मु.मे.मो.टा.टि.टु.टे) : आफन्तजनबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । चन्द्रमाको साथ रहेको छ । दाम्पत्य जीवनमा सुख प्राप्त हुनसक्छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भए पनि क्रमिक सुधार हुनेछ । यात्राबाट खुसियाली छाउने छ । परिवारको साथ सहयोगले मनमा प्रशसन्नता छाउने छ । कुनै नयाँ कामको शुरुवात पनि गर्न सक्नुहुनेछ ।
कन्या (टो.प.पी.पू.ष.ण.ठ पे.पो) : आजदेखि मनमा रहेको चिन्ता हटदै जानेछ । तपाईँको कारण आफन्तसँग सम्बन्ध विग्रन सक्छ । अध्ययन अध्यापनबाट सफलताप्राप्त हुनेछ । आज स्त्रीजातिको साथ सहयोगबाट कार्य गर्दा सफलता प्राप्त हुन्छ । कुमारी कन्यालाई केही खानेकुरा र बस्त्र दान दिनु होला । देवीको मन्दिरको यात्राले तपाईलाई मनमा शान्ति प्राप्त हुनेछ ।
तुला ( रा.री.रु.रे.रो.ता.ती.तु.ते) : आजको दिन तपाईँको यात्रा कार्यमूलक हुनेछ । कुनै कामको शुरुवात गर्नुभएको छ भने त्यो कामको सम्पादन पूरा गर्नका लागि मेहनतपूर्वक लाग्नु होला । कलाकारितामा र रचनात्मक काममा मन जानेछ । परिवारमा वा स्त्रीजातिहरुसँग विवाद हुनसक्छ, त्यसैले आजको दिन कार्य गर्दा तुला राशिका जातकले सोच विचार गर्नु उत्तम होला । महिलासँग विवाद हुने कार्य भरसक नगर्नुहोला ।
वृश्चिक (तो.ना.नि.नु.ने.नो.या.यि.यु) : यात्राको अवसर र संभावना पनि छ । यात्रा गर्दा सूर्योदय भन्दा पछि र सूर्यास्त भन्दा पहिले यात्रा समापन गर्नुहोला । आजको दिन सकेसम्म कसैसँग विवाद हुने कुरा नगर्नुहोला । तपाईलाई विवादबाट हानी मात्र हुनेछ । आर्थिक हानी हुने संभावना छ । त्यसैले आजको दिन खर्च गर्नुभन्दा पहिले एक पटक सोच विचार गर्नुहोला । सकारात्मक सोच, र नियमित काममा समय खर्चनुहोला ।
धनु (ये.यो.भा.भी.भु.ध.फा.ढ.भे) : आजको दिन आकस्मिक धनलाभ हुनेछ । आजको दिन सोचअनुसारको काम हुनेछ । सन्तानबाट सुख र स्त्रीजातिको साथ सहयोगले राम्रो काम गर्नुहुनेछ । आफन्त र परिवारजनबाट साथ सहयोग हुनेछ । त्यसैले आजको दिन मानसम्मान समेत मिल्नेछ । सामाजिक र अध्यात्मसेवाको कार्यमा लाग्नु होला ।
मकर (भो.जा.जी.जू.जे.जो.ख.खि.खु.खे.खो.गा.गी) : आजको दिन सरस्वतीको आरधनाले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ । विगतदेखि गर्दै आएको कामबाट मान सम्मान प्राप्त हुनेछ । दुःखका कुरा कम र हर्षका कुरा बढी गर्नु होला । सकारात्मक सोच राखेर काम गर्नुहोला । अनावश्यक आरोप पनि लाग्न सक्छ । नियमित काममा मात्र लाग्नुहोला । नयाँ कामको थालनी नगर्नु बेस हुनेछ ।
कुम्भ (गु.गे.गो.सा.सी.सु.से.सो.द) : सामाजिक सेवा गर्दा मानसम्मान मिल्नेछ । आजको दिन शनिदेवको मन्दिरमा पुगेर दर्शन गर्दा उर्जा प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा सुख, समृद्धि प्राप्त हुनेछ। सामाजिक सेवाका काम गर्नु उत्तम हुनेछ । परिवारका जेष्ठ सदस्यलाई उपहार दिएर आशीर्वाद लिनु उत्तम हुनेछ । बालकन्यालाई खानेकुरा र बस्त्र दान दिनेभयो भने तपाईलाई आशीर्वाद मिल्नेछ ।
मीन(दी.दु.थ.झ.ञ.दे.दो.च.ची) : आजको दिन गृहस्थ जीवनको कार्यमा समय खर्च गरेर बस्नु भएकामा तपाईँको हित हुनेछ । अध्ययन, अनुसन्धान र लेखनको काममा समय दिनु भयो भने उत्तम हुनेछ । यात्राको अवसर पनि आउनसक्छ । स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुहोला । देवालयको यात्रा र गुरुजनको आशीर्वादको लागि गुरुसेवा गर्दा फल प्राप्त हुनेछ ।